Tirada dadka ku nool Iowa ee u dhintay dhibaatooyinka cudurka cusub ee coronavirus ayaa gaadhay 5,40 | KWIT
Gudoomiyaha gobolka Kim Reynolds ayaa amar ku bixiyay in dhamaan calamada Iowa la hoos dhigo kala badh shaqaalaha isla markaaba ilaa ay qoraxdu dhacdo jimcaha. Tallaabadan ayaa lala xiriirinayaa dhawaaqii Madaxweyne Joe Biden ee lagu maamuusayay 500,000 oo qof oo ku dhintay cudurka Coronavirus ee dalka Mareykanka.
Calanaduhu waxay joogi doonaan kala-badhka shaqaalaha ee Dhismaha Xarunta Gobolka iyo dhammaan dhismooyinka dadweynaha, sagxadaha iyo tas-hiilaadka gobolka oo dhan.
Kuwa kale waxaa lagu dhiirrigelinayaa inay calanka ka dul-bartaan shaqaalaha nuska u ah isla waqtigaas oo ah calaamadda ixtiraamka.
Tirada kiisaska cusubi waxay ku sii socotaa hoos u dhaca Nebraska, iyo tirada dadka la seexiyay COVID-19 ee gobolka ayaa weli ku jira heerkii ugu hooseeyey tan iyo bilowgii dayrta.
Nebraska ayaa soo warisay in ka badan 1,700 kiis oo cusub usbuucii la soo dhaafay, taasoo ka hooseysa 3,606 usbuuc ka hor. Waxaa jiray 2,050 dhimasho gobolka oo dhan iyadoo 67 ay ku dhinteen Degmada Dakota.
Waaxda Booliska Magaalada Sioux waxay soo saartay tirakoob hordhac ah oo muujinaya 26% guud ahaan kororka dambiyada rabshadaha ah sanadkii kahoreeyay. Dembiyada hantida ayaa hoos u dhacay 15%. Taliyaha bilayska ayaa sheegaya in halka cudurka faafa ee COVID-19 uu u badan yahay inuu saameyn ku yeeshay lambarrada dambiyada maxalliga ah, laakiin ma bixin karo faahfaahin gaar ah sababta ay dambiyada rabshadaha wata u jiraan. Waxaa jiray lix dil ama dil sanadkii 2020 iyadoo qoryaha ay ku lug lahaayeen qaar badan oo ka mid ah dambiyadii rabshadaha badnaa ee magaalada ka dhacay.